Fitsangatsanganana any Iran, ireo toerana manintona mpizahatany | Vaovao momba ny dia
Tamin'ny herinandro lasa dia niresaka kely momba izany isika Iran, momba ny firenena, ny kolontsainy, ny tantarany kely ary ny fampahalalana fototra sasantsasany izay ilaina ho fantatra alohan'ny hanombohana dia. Eny, mandehana mankany Iran. Izay no resaka. Indraindray tsy maintsy mamono kely ny fahitalavitra ianao ary mamela ny tenanao handeha.
Raha liana ianao ary manadihady kely ny tantaran'ireo mpandeha nandeha an'io firenena io dia hilamina ny tahotra ary isaky ny andalana vakianao sy sary hitanao dia hahazo faniriana bebe kokoa hahita firenena izay azo antoka fa tsy tokony ho ianao demony loatra. Ankafizinao ny tantara? Avy eo dia tsy maintsy mitsidika ireo toerana tsy manam-paharoa ianao, ireo mpizahatany lehibe.
Inona no hitsidika an'i Iran
Iran dia manana tanàna lehibe vitsivitsy, fa kosa mba hanamora ny fampahalalana izay hampihena ny zava-drehetra amin'ny toerana roa, Tehran sy Persepolis. Tsy manadino an'i Esfahan sy i Shiraz aho, fa avelantsika ho an'ny lahatsoratra iray hafa izy ireo. Andao atomboka amin'ny iray amin'ireo manintona malaza indrindra: Persepolis.
Persepolis dia ao Takht-e Jamshid ary renivohitry ny Empira Persia. 75 kilometatra monja avy eo Shiraz izy io ka mila mandamina kely fotsiny ianao mba hanoritana làlana tsara. Nanomboka nanangana an'i Darius Mpanjaka I izy io saingy naharitra roanjato taona teo ho eo ireo asa ireo. Tonga teto i Alexander Lehibe, nanafika azy, nibodo azy ary nandrava azy tamin'ny taona 330 talohan'i Kristy, nanamarika ny fandaozana azy sy ny fiafarany.
Navela rava fa nandritra ny taonjato maro dia nisy mpandeha sasany nanana vintana tsara ny hisaintsaina. Taty aoriana dia tonga ireo mpikaroka tany Eoropeana ary amin'izy ireo dia mila an-tsary ny sarin'izany tamin'ny taonjato faha-XNUMX, faha-XNUMX, ary faha-XNUMX. Androany, na izany aza, dia mbola misy fiantraikany hatrany: tohatra goavambe, fanamaivanana sarobidy, varavarana napetraka, tsanganana voahorona etsy sy eroa, vavolombelona mangina rehetra momba ny voninahitra taloha sy mandrakizay.
Tandremo fa raha mankany Persepolis ianao manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra dia hahita masoandro be ianao ary alokaloka kely dia kely toy izany aza adino ny solomaso sy ny ranonao. Ataovy ao an-tsaina fa tsy azo atao ny kitapom-batsy na ny tripod ka voatery tafiditra ao am-paosinao ny zava-drehetra. 4 $ ny fidirana ary misy toeram-piantsonana izay mitentina US $ 1.
Tehran no renivohitra ary toy izany dia mifantoka mahaliana maro. Ilay Bazar Tabriz tsara tarehy sy maro loko dia Lova Iraisam-pirenenal: Izy io dia manana kilometatra toradroa fito, efi-trano mitafo lehibe ary efa ho arivo taona izao, na dia ny taonjato faha-XNUMX aza ny rafitra hitantsika ankehitriny. Betsaka ny fivarotana natokana ho an'ny fivarotana tapis, maro karazana ny karazany, nefa amidy koa izy ireo zava-manitra, ahitra fanafody, ranomanitra, satroka nentim-paharazana volonondry voatenona antsoina hoe kisendrasendra, kiraro, zavatra volamena, fitaovana ao an-trano, sns
Misokatra ny asabotsy ka hatramin'ny alakamisy manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 9 alina ary ny fomba tsara indrindra hidirana dia amin'ny alàlan'ny lalana tery izay atsinanan'ny biraon'ny fizahan-tany. Hitondra anao hatrany amin'ireo fivarotana firavaka ianao. Aorian'izay, mirary soa! Toerana iray hafa eto an-drenivohitra ny Lapan'i Golestan, toerana tsara tarehy izay ny axis an'ny tanàna. Eo anelanelan'ny Bazaar sy ny Kianja Iman Khomeini no misy azy ary io dia mariazy palatialy iray voahodidin'ny zaridaina tsara tarehy.
Ny zavatra ratsy dia hiditra isaky ny trano ny sarotra tsy maintsy mandoa fidirana. Tsy dia antitra ireo trano, na dia miorina amin'ny tranobe taloha aza izy ireo, satria naorina tamin'ny fotoana nanjakan'i Sha Nasser al-Din nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Inona no tsy tokony hatao? El Efitrano ho an'ny mpijery an'i Ivan-e Takht-e Marmar, efi-trano malalaka izay misy seza fiandrianana izay maka ny fofonain'ny rivotra, vita amin'ny alabastera mavo 65. Eto no handehananao mandehandeha ao amin'ny pisinina hitanao nandalo ny biraon'ny tapakila.
Ny faharoa dia a Terrasà avo iray izay ahafahana mijery ny toerana sarotra. Nasser al-Din no nanangana azy ary io no fasany marbra no tazonina eto ankehitriny. Ny efitrano fitaratra Nikatona nandritra ny telopolo taona fa efa nisokatra. Izy io dia tranokalan'ny fanjakan'ny mpanjaka sy fampakaram-bady ary trano misy chandelier goavambe nentina avy tany Russia sy fanomezana avy amin'ny firenen-kafa. Fantatra amin'ny anarana hoe Tranombakoka Talar-e Ayaheh.
Azonao atao koa ny manondro: ny Fananganana ny Masoandro, miaraka amin'ny fahitana malalaky ny tanàna sy ny atin'ny efitrano misy fitaratra feno fanomezana sy fanaka avy any Eropa, ny Amboaran-tsarin'ny tantara miaraka amin'ny sarin'aina sarobidy eo amin'ny fitsarana, ny Diamond Hall na Talar-e Almas, miaraka amin'ny kanto haingo eoropeanina, ny Tranombakoka Ethnographic miaraka amin'ny mannequins miakanjo amin'ny lamaody taloha sy ary ny tilikambo rivotra izay nampiasaina ho toy ny rafi-panafihana fahita lavitra nefa mahomby. Ilay be pitsiny sokafy ny Alahady ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4:30 hariva ary 4 dolara amerikana ny fidirana. Avy eo tsy maintsy ampiana US $ 1 isaky ny trano ianao.
Any Tehran ihany koa ny Toeram-bakoka Sad-abad. Trano fahavaratra izy io nandritra ny vanim-potoanan'ny Pahlavi ary 104 hekitara akaikin'ny tendrombohitra no misy azy. Ahitana tranombakoka 18 ao anatiny natokana ho an'ny tena fiara, sary hosodoko kely, latabatra tena izy, izay azonao eritreretina. Mandany izany dia mety maharitra adiny telo. Ity toerana ity sokafana ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 4:30 harivam sy tapakila dia vidiana eo am-baravarana fidirana na amin'ny varavarana avaratra fa Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe inona no hotsidihinao alohan'ny hividianana azy satria tsy misy tapakila iray ahitana ny tranombakoka rehetra. Ny fidirana dia US $ 4 ary ho an'ny tranombakoka tsirairay dia mandoa US $ 50 fanampiny ianao.
Raha miditra amin'ny varavarana lehibe ianao dia afaka miditra amin'ny minibus maimaim-poana izay mampifandray tranokala roa tsy maintsy jerena: ny White White and the Green Palace. Ny White Palace dia natsangana tamin'ny taona 30 tamin'ny taonjato faha-54 ary ho hitanao ny sambo varahina roa goavambe eo am-baravarana izay hany sisa tavela amin'ny sarivongana lehibe an'i Sha Reza. Misy efitrano XNUMX ary saika tsy nisy niova hatramin'ny Revolisiona, dia mirentirenty be tokoa.
Ho azy ny Green Palace Any an-tampon'ny havoana io ary amin'ny fomba mahazatra kokoa. ihany koa be sandry izy io, misy fitaratra avy amin'ny valindrihana na dia ao amin'ny efitranon'ny mpanjaka aza. Avy eo ianao dia afaka manao ny zavatra rehetra an-tongotra ary ho fantatrao ny Tranombakoky Royal Automobile Miaraka amin'ny Cadillacs sy Mercedes Benz, ny Tranombakoka Fine Arts, tranombakoka Royal Tableware ary tranombakoka Miaramila, ohatra. Fahagagana amin'ny harena tafahoatra.
Manampy tranokala iray hafa aho: ny Harem-pirenena Jewels Nasionaly. An'ny Banky Foibe izy io ary ao anatin'ny tranobe misy azy tokoa. Raha nahita ny sarin'ny mpanjaka misy firavaka sy akanjo manja ianao dia ho hitanao eto ireo firavaka mivantana sy mivantana. Misy fitsangatsanganana mahazatra amin'ny fiteny anglisy, arabo, alemanina ary frantsay ary koa brochure. Ireo fitsidihana ireo dia tafiditra ao amin'ny vidin'ny tapakila ary mba tsy hamela na inona na inona ao amin'ny fantsom-panafody dia tsara ny misoratra anarana.
Misy a Diamondra mavokely 182 carat tsy tapaka, toa ny lehibe indrindra eto an-tany, ny Seza vorombola, la Satro-boninahitr'i Kiani tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny satro-boninahitry ny shah farany talohan'ny revolisiona Khomeini sy ny Globe firavaka miaraka amina vato sarobidy mihoatra ny 51 izay amoron'izao tontolo izao misy emeraoda, robina ary diamondra.
Mazava ho azy, tsy misy sary na kitapom-batsy. Ity tranokala tena atolotra anao ity dia hita eo amin'ny arabe Ferdosi sy sokafy manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 4:30 hariva, manomboka amin'ny Asabotsy ka hatramin'ny Talata ary hatramin'ny 3:30 hariva eo anelanelan'ny Novambra sy Martsa. 4 $ ny vidim-pidirana ary tsy mahazo ny zaza latsaky ny 50 taona. Nifarana ity lahatsoratra ity ary tsy mampino ny isan'ny toerana fizahan-tany sisa tavela ao amin'ny tranofiara misy ahy, saingy mampanantena ny hiverina aho satria tiako bebe kokoa i Iran.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Fitsangatsanganana any Iran, toerana manintona ny mpizahatany
Vao avy tany Iran aho. Amiko Persepolis sy Tehran no malemy indrindra amin'ny firenena, raha misy malemy. Azonao alaina sary an-tsaina ve ny toetran'ny olona sisa, MAHAGAGA. Manantena ny lahatsoratrao manaraka aho.
Zavatra hatao maimaim-poana any Madrid